I-China 28/400 ye-Stainless yensimbi ye-Lump Pump Soap Pump Fekt kunye nabaxhasi | IHoyer
I-28/400 Impompo yesiporho seSumpless
Ubungakanani: 28/400, 24/400, 28/410, 24/410, ityhubhu ubude zii-intshi ezi-8, ubude bempompo ngaphandle kwe-tube 4-3 / 8 inches. Ubude be -hubhu bunokwenziwa ngokwezifiso ukuba unayo enye ibhotile engalungelanga obu bude.
obunye ubungakanani obufumanekayo: 24/410, 28/410, 24/400
Umbala: umbala wokuqala
I-MOQ: I-5,000pcs, ubuncinci obuncinci buyamkeleka ukuba sinesitokhwe
Isixhobo: Impompo yenziwa ngentsimbi ye-304 yentsimbi kunye ne-BPA-engenasipinki yangaphakathi kunye nenxalenye yangaphakathi ngoko ikhuseleke kakhulu kuyo nayiphi na into engamanzi, ilaphu, isepha okanye okunye okungaphakathi, inokusetyenziselwa ixesha elide kakhulu ngenxa yokumelana nokudumba.
Ukusetyenziswa: Umtya omgangatho wokuqala wama-28/400, uyafanelana nayo nayiphi na ibhotile enobungakanani bentamo, akunandaba nokuba ibhotile yiplastiki okanye impahla yeglasi. Olona loyilo luthandwayo luyenza lukhetheke ikhitshi kunye negumbi lokuhlambela, okanye nokuba ubekwe emotweni. Inokusetyenzwa ngotywala obuninzi, njenge-lotion, i-shampoo, i-sanitizer yesandla, i-conditioner kunye nesepha yesitya.
Ukukhuphela lula kunye nokukhuhla, kulungele kakhulu ukuzalisa ii-alcohol, kwaye kulula kakhulu ukucoca.
Qaphela: Nceda ugcine abantwana bengaphantsi kweminyaka emi-5 kude kwinto engotywala, banokwenzakala ukuba ulwelo luphindaphindwe emehlweni.
Ubungakanani Ngama-28/400Ubude bempompo ii-intshi ezi-4 ukuya kwezi-8, ubude buziisentimitha ezi-8. 28/410, 24/400, 24/410 yamkelekile
Umbala isilivere Izinto zensimbi ezingenazintsimbi zinombala wesilivere kuphela
I-MOQ I-5,000pcs Inani elincinci liyamkeleka ukuba sinesitokhwe
Ukulungiswa kweposi I-logo egcizelelekileyo, uyilo lwe-OEM luyafumaneka.
Edlulileyo: Umgangatho ophezulu wePlastiki ye-28/410 yeplasitiki yeLotion okanye ngeSepha yoTywala
Okulandelayo: I-28/410 i-Aluminium eQokelelweyo yeAluminiyam yeBhotile yeGlasi
Ipompo ye-lotion engama-28/400
ibhotile yeglasi yelayisi
Impompo yokuthambisa yelenziwa ngesinyithi
Umgangatho ophezulu wePompo eyi-28/410 yeplasitiki yeLotion okanye ...
Umgangatho oMiselweyo weRattan Reed Diffuser St ...
Intyatyambo entle ebonakalayo eyenziwe ngeSola eyomileyo yeentyatyambo ...
I-3mm * 25cm Reed Stick ye-Diffuser Bottle
I-16oz 500ml i-Glass ye-Amber ye-Boston ngeBlack ...
I-28/410 isiQinisekiso seAluminium esiyiGlasi yeDiffus ...